Axial ceejiya Inductors-Alp
Kale Axial Inductor
transformer ee hadda
RH Band Wide ceejiya Core
Inductor xiriira Su'aalaha
Getwell Electronics (Huizhou) Co., Ltd. waa shirkado wadaag ah Sino-shisheeye, waxaa la aasaasay sanadkii 2004. Waxaan na soo bandhigid sida mid ka mid ah soo saaraha ugu wanaagsan xirfadle inductor ee Shiinaha, kaas oo ku takhasusay kit inductor saarka, inductor smd, Toroid gariiradda, radial Inductor Lead iyo transformer Frequency High. waxyaabaha lagu ballaaran khuseeya awoodda macaamiisha, nalal, isgaarsiinta, instrumentation, caafimaadka, ammaanka iyo tamar cusub, looxaanta ku amraya raso, korantada baabuurta iyo beeraha kale.
Waqtigan xaadirka ah, Getwell korontada uu leeyahay 200 oo shaqaale, oo ay ku jiraan 20 injineerada waayo-aragnimo qani ah, iyo sidoo kale 12000 mitir murabac oo meelo warshada casriga ah. Iyadoo 14 sano ee technology-soo-saarka xirfadeed iyo waayo-aragnimo maamul. Shirkadda Our leeyahay nidaamka kaamil ah maamulka, iyo sidoo kale in ka badan toban sano xirfadeed technology-soo-saarka inductance, shaqaalaha xirfad iyo farsamo, complete qalabka wax soo saarka iyo qalab imtixaan, sida toos ah mashiinka irbad, mashiinka pin automatic, mashiinka quwad si toos ah, iyo wixii la mid ah.
Iyada oo qaab deggan iyo qiimaha tartan rasmi ah, waxyaabaha aannu si fiican u iibin adduunka oo dhan, iyo warshad waxay leeyihiin xuquuq dejinta iyo dhoofinta madax banaan, waxay naga caawin kartaa yimaadaan si ay iskaashi fiican la macaamiisha. Haddaba Shirkadda ayaa u hormaray matoorada, iswada iyo caqli ganacsiga wax soo saarka oo baaxad weyn oo ah.
korantada Getwell had iyo jeer diyaar u yihiin in ay bixiyaan macaamiishu la soo saarka iyo adeegyada ugu fiican. Waxaan si daacad ah u doonaya inuu adkeeyo iskaashiga ganacsi muddada dheer adiga iyo abuuro xaalad guul-guul ah.
Cinwaankaaga: Yihe-West Industrial Zone, LuoYang Town, BoLuo County, HuiZhou City, Gobolka Guangdong
inductor gariiradda smd, inductor hogaanka radial, smd inductor 22uh, inductor smd 47uh, inductor sunta rasaasta radial , awood inductor,